Inhliziyo I-China Electric Vibrating Foam Roller Fitness Sport Recovery Yoga Massage Abakhiqizi nabahlinzeki |Hemeikaineng
I-Electric Vibrating Foam Roller Fitness Sport Recovery Yoga Massage
Lo mkhiqizo udume kakhulu kumakhasimende emhlabeni wonke, futhi amakhasimende amaningi axhumana nathi ukuze athenge ngobuningi.Imikhiqizo yethu ingeyekhwalithi enhle futhi intengo iyifanele ikhwalithi.Uma udinga amasampula, ungaxhumana nathi kuqala, singakunikeza amasampula ukuze uhlole ikhwalithi.
Irola legwebu elidlidlizayo elinamandla kakhulu lokumasaja kwezemidlalo nokululama kwemisipha.I-Vibration therapy (VT) ingathuthukisa amandla namandla, ikhulise ukugeleza kwegazi kanye nobubanzi bokunyakaza (ROM) emisipha futhi inciphise ubuhlungu.Ungakhetha kalula ileveli yokudlidliza nemodi ukuze usebenzise ukuqina okudingayo.Ishaja ngokushesha ngebhethri elisezingeni eliphezulu, yakhelwe abasubathi abangochwepheshe, abathanda ukufaneleka njll.
Igama Lomkhiqizo I-roller yegwebu lokudlidliza
Imodeli No. A02-M-002
Ikalwe I-Voltage/Yamanje I-DC 5V 2.0A
Amandla ebhethri 5000mAh
Isikhathi sokushaja Cishe amahora ama-3
Impilo Yebhethri Amahora angu-5-8
Izinga lokudlidliza 4 amazinga
Usayizi Womkhiqizo 91*91*318 mm
Isisindo sengqikithi awu 840g
1. Ukuthungwa kwe-Dynamic: Iphethini ehlukile yokuqagela iletha ukukhuthazwa okujulile okwenza kuzwakale sengathi icindezela ngeminwe yakho.
2. I-High Intensity Vibration: Izivinini zokudlidliza ezi-4 ezihlukene ezinamaphethini amagagasi angu-2, ungakhetha inani elilungile lejubane nokuqina elikusebenzelayo.
3. Ukushaja Ibhethri Okulula: Esikhundleni se-Micro USB, eyethu ifakwe imbobo yohlobo C elula ukuyisebenzisa futhi ingashajwa ngokugcwele cishe amahora angu-3.
4. Impilo ende yebhethri: 5000mAh umthamo webhethri ophezulu, nempilo yebhethri ephelele yamahora angu-4, idinga kuphela ukushajwa kanye ngenyanga.
5. Ihlala isikhathi eside futhi Iqinile: Yakhiwe ngezinto zekhwalithi ezingeke zibhidlizwe noma zilahlekelwe isimo ngenxa yokusetshenziswa okuphindaphindiwe, okusekela okungenani kufika ku-150Kg (330 pounds).
2. Imikhiqizo isidlulile i-CE, i-FCC, isitifiketi se-ISO.
Okwedlule: I-Medical Oxygen Concentrator Abantu Abadala I-Oxygen Concentration High 10L yasesibhedlela
Olandelayo: I-UV100 Ephathwayo Ephathwayo Encane Encane Ye-LED UVC Isibani Isibani se-UV Sterilizer Wand
Thenga i-Vibrating Foam Roller
imishini yokuzivocavoca ye-foam roller
i-foam roller vibrating
I-Foam Vibrating Roller
Ukudlidliza kwe-Massage Foam Roller
i-yoga foam roller
Inyanga Enembe Kakhulu Ephatheka Kahle Yomfutho Wegazi Wesandla...
I-Novel Coronavirus (COVID-19) Antibody IgM, IgG T...
Ku-Stock Electronic Arm Blood Pressure Monitor ...